Iipropati eziwusizo ze-St. John's wort
I-wort yaseJohn iyaziwa ngokubanzi ngeendawo zayo ezincedo kwiintlanga ezahlukeneyo. Esi sityalo, esinokukwazi ukuqhuba imimoya emibi, sasijongwa njengomlingo. I-St. John's Wort yinyango yezifo eziyi-100. Kwizilwanyana, kubangela ubuthi obubi kwaye kuthathwa njengesityalo esinetyhefu, kubalulekile ukugcina ukumodareyitha nokulumkisa xa uthatha. Intambo yaseSt. John ikhula kuyo yonke indawo, iyisityalo esingunaphakade kwaye isasazwa ngokubanzi, wonke umntu uyazi malunga nezakhiwo ezixhamlayo ze-St. John's wort. I-St. John's wort ingaphilisa izifo ezahlukahlukeneyo, unceda ngeengqondo zengqondo kwaye i-antidepressant kakhulu.
Ziziphi iingqinisiso zeWort John's wort?
I-St. John's Wort isityalo esinetyhefu, kufuneka uqaphele impilo yakho xa uthatha esi sityalo. Kubungozi kubantu abanezifo ezixinzelelekileyo, njengoko intambo yaseSt. John ivimbela imithana yegazi, kwandisa uxinzelelo lwegazi. Iimvakalelo ezingathandekiyo zingavela kwisibindi.
I-wort yaseJohn St John iqukethe amafutha abalulekileyo, i-phytoncides, i-nicotinic acid, i-vitamin C, i-tanins, i-flavonoids kunye nabanye. I-St. John's wort isetyenziselwa izilonda zesisu, izifo zesifo, i-hypertension, i-anemia, i-hemorrhoids, i-migraine, kunye ne-acidity eyandisiweyo yerusi yesisu, ngokukhwehlela. Kwaye kwimihlathi yesifo, isifo sofuba, ngokubanda, kunye nezifo zokuphefumula, njalonjalo.
Uqoqo lwe-St John's wort
Izithambiso zeSt. John zikaJuni ukuya kuAgasti. Ingca iyavunwa ngexesha lokusila. Sika u-20 cm weentsha. Ukusasazeka kwezityalo kwintlambo kushiya ibini le-inflorescences, utshani luboshwe kwiimfumba ezincinci kwaye lubekelwe ukuma. Ingca eyomileyo ngaphandle kokufudumala okufakelwayo, endaweni epholileyo yomoya, kwi-attic. I-wort yaseJan John igcinwa malunga neminyaka emithathu.
I-St. John's wort in broths kunye ne-infusions
Thatha i-tablespoons yesiqingatha semifuno, uthele iirazi yamanzi abilayo kunye nesiqingatha seyure ukufudumala kwindawo yokuhlamba amanzi. Emva koko upholile kunye noxinzelelo, finyelwa, yongeza amanzi aphelileyo abilisiwe ukuze ufumane iglasi lokungenisa. Thatha i-decoction isiqingatha seyure ngaphambi kokutya, kathathu ngosuku.
I-300 grams yamanzi abilisiwe uthathe iipuniwe ezi-2 ze-St. John's wort. Isiqingatha seyure ukugxininisa, uthathe ngaphambi kokutya, isiqingatha seglasi kathathu ngosuku. Thatha i-rheumatism, isifo sesibindi, nge-cystitis, ngentlungu esiswini, ngeentloko.
Lungiselela ukunyuswa kwe-St John's wort
Thatha ingilazi yamanzi abilayo i-10 grams ye-St. John's wort (utshani obomileyo), ugxininise imizuzu engama-40. Thatha emva kokutya amaxesha angama-6 ngosuku ngepunipoon.
Lungisa ijusi likaSt. John's wort
Kwixesha leentyantyambo ze-St. John's wort, hla nganisa ubuninzi beentsha. Ukuba akukho i juicer, prola ingca ngokusebenzisa inkqubo yokutya, faka ubuninzi kwi-gauze uze uyifake ngesandla. Thatha ijusi isigamu seyure ngaphambi kokutya, kwipunipoon ukuze unciphise ubuhlungu, uthathe nobusi.
I-St. John's wort yeerinses
I-tincture yeerinses -½ ilitha ye-vodka, i-20 amagremu emifuno, igxininise iintsuku ezili-15. Emva koko.
Faka isicelo, uhlalutye amaconsi angu-30 e-tincture kwisiqingatha seglasi yamanzi. Emva koko supha umlomo wakho emva kokutya kathathu ngosuku.
Kwaye kwasetyenziswa ukutshisa, amanxeba, izifo zesikhumba.
Ioli ye-wort yaseSt
Ioli yelanga ye-sunflower isuka kwi-wort yaseSt. John ishiya kwindawo engama-4: 1, ibeke umhla o-21 obala ehlabathini. Emva koko uxinze kwaye ugcine kwindawo epholileyo, kwiqrijini.
Enye iresiphi yeoli yokupheka evela kwi-wort yaseSt. John:
200 igrisi yeoli yelanga ye-sunflower ithulule iipuniwe ezi-3 zezimbiza ezintsha. Ukufakela kwindawo epholile, emnyama kwiiveki ezimbini, rhoqo ukugubha. Ukunyamezela.
I-ointment evela kuSt John's wort kunye ne-radiculitis
Utyani obomileyo luhlahliwe ube ngumgubo, luxutywe ne-turpentine kunye neoli yezolimo, ukwenza umxube omhle. Ukusebenzisa rhoqo amafutha ngexesha lomhla, ukuxubha kwiindawo ezinzima.
I-St. John's wort tea
Thatha isipuni ngaphandle kwesilayidi kwikomityi yesoqingatha yamanzi, ukuphuza kunye nokugxininisa njengetayi evamile. Ungaphuza ngaphambi kokutya inkomityi yeekhi yeeyi kathathu ngosuku.
Ngoku siyazi malunga nezakhiwo ezincedo ze-St John's wort. Ukwazi izakhiwo ze-St. John's wort kwaye uyisebenzisa njengetiyi, amafutha, i-tincture okanye umhluzi, ungaphilisa impilo kwaye uyisebenzise njengokhuselo lwezifo ezahlukahlukeneyo.
Ungayikhupha njani intlungu emlanjeni?
Indlela yokujongana noxinzelelo emsebenzini
Indlela yokufunda indlela yokuzonwabisa?
Iimpawu ze-metabolic ":" kutheni ungalahlekelwa bunzima kunye nendlela yokujamelana nayo
Imfashini kubantu abaqhelekileyo
I-Kombuha-tea - indlela engcono yokususa iigesi kunye nama-slags emzimbeni
Iingxaki zentsapho ekukhulisweni kwabantwana
Ukunyamekelwa kwendoda: ngaba kunokwenzeka ukuba ubuyele kwaye njani?